Jacaylka Fikradaha Songs Day
> Resource > Talooyin > Maalinta Jacaylka Song Fikradaha
Maalinta Jacaylka waa maalinta dhaqanka kaas oo aad ku tusi sida aad u daryeeli ku saabsan kuwa jecel yahay diraya kaararka Jacaylka, soo bandhiga ubaxyo, ama bixiya macmacaanka. Hadda Qarniga 21aad, Valentines eCards labadaba Flash ama Muqaal, aad ayaa loo jecel, gaar ahaan dhallinyaradu. Haddii aad dhibaato ku heli songs Valentine ku haboon ama jacaylka heeso samaynta Valentine ee kaararka video aad leedahay, halkan waa meel si aad u hesho Maalinta Jacaylka talooyin song.
Eeg sidoo kale : Hel Maalinta Jacaylka Songs for Free
Top 10 Maalinta Jacaylka Songs of All Time
Kuwaasu waa 10 songs hogaanka Maalinta Jacaylka ee waqtiga oo dhan sida laga soo xigtay kooxdayada:
Inta aad i jeceshihiin - kvaksalver Boys
Ma inaad ku gaadhaan danihiina - Faruuryaha ololaya
Waxaan Just yeedhay waxaad ku tidhaahdaan waan ku jeclahay - Stevie Wonder
Free Download Music ka YouTube
Just sida aad tahay - Bruno Mars
Jeclaada Love Me Do - Beatles ayaa
Qalbigaygu kulama socon doonaa On - Celine Dion
Waxba ee qeybiso Change My Love Waayo, waxaad - George Benson
Waxaad dhahdaa Haa - Elliot Smith
Runtii, Madly Hiddo - Savage Garden
Waxaad tahay Beautiful - James Blunt
Top 10 Maalinta Jacaylka Songs 2012
Sida aan dhihi songs Maalinta Jacaylka 2012, waxaa macnaheedu ma aha heeso lagu sii daayo ee 2012, laakiin waa diiwaanka cusub oo caan ah oo ka mid ah kuwii ku caashaqi jiray dhalinyaro ah music. Heeso Maalinta Kuwani Valentine ee si fudud u dhigay doonaa habayn jaceyl wax kasta waa xisbi ama cashada shumac-shiday ah.
Gym Class Heroes - Cupid noolna
Jason Mraz (muuqan Colbie Caillat) - Lucky
Miley Cyrus - 7 Waxyaabaha
Adeegyada Boostada The - noocan oo kale ah Great Heights
U2 - Iyadoo ama adiga la'aantaa
Best Maalinta Jacaylka Songs for Kids
Maalinta Jacaylka waa dhan oo ku saabsan jacaylka, iyo saaxiibtinimo iyo diraya kaararka Valentine. Kids heesi kartaa in songs, kuwaas oo si wadajir ah u gaar ah Maalinta Jacaylka ah. Qaar ka mid ah heesaha Day kuwaas oo Valentine ee sidoo kale waa weyn ee dadka waaweyn. Diyaar u reminisce Maalin Valentine ee gaarka ah waqti dheer ka hor?
Hab A - Carruurta WLA ee Choir
Noqo My Valentine - Jack Hartmann
Shan Valentines - Karen Rupprecht & Pam Minor
Waan ku jeclahay, Waxba ma ahan wixii - Jack Hartmann
Waa Love - Jack Hartmann
Love u koraan mid mid - Carol Johnson
Waa sida Boomerang ah - Jim Rule
Song halxidhkii - dhaqameedyada Folk Song
Valentine: Card Heesaha A - Marla Lewis
Maalinta Jacaylka xisbiga Dance - Jack Hartmann
Jacaylka Song - Hap Palmer
Yaa iigu Valentine? - Linda Brown / Dr. Thomas Moore
Waxaad tahay Wonderful - Debbie Clement
Talooyin: Samee Maalinta Jacaylka Movie khasnaddii Times ayaa si wadajir ah
Haddii Maalinta Jacaylka 2012 waa marka hore aad Maalinta Jacaylka wada, ama shan iyo tobnaad, waa fikrad wanaagsan in la soo wada ururiyo ilaa Jacaylka sawir Day oo la sameeyo filim Valentine ah xumme tahay maalinta aad leedahay wada ku qaataan, ama xataa gubi ah Maalinta Jacaylka DVD Gift u soo dirto la yaab leh? Sii DVD Muqaal dhise isku day ah.